Kana Iwe Waisada Yangu Maonero, Iwe Waifanira Iwe Usina Kubvunza! | Martech Zone
Chimwe chezvinhu zvikuru nezve zvandinoita ndechekuti zvinondiisa mukutaurirana nemamwe makambani andakamboshanda nawo kana kuashandira. Nhasi ndagamuchira imwe nhau yaishungurudza, zvakadaro.
Inenge mwedzi wapfuura, ndakapedza maawa mashoma ndichizadza ongororo yakazara iyo yakatumirwa kwandiri kubva kune imwe yemakambani andaishandira uye ikozvino yakanga ichishanda kubatanidza uye kutengesa zvakare. Ndakadurura moyo wangu mukambani pandanga ndiripo uye ndichiri kuda vanhu vavo uye zvigadzirwa zvavo nemasevhisi nanhasi uno. Nekudaro, izvo zvikonzero zvandakasiya kambani zvakaramba zvichibuda sezvo isu taishanda kutengesazve chikuva - chakadzivirirwa interface, kushomeka kwemaficha, kudhura, nezvimwe.
Ndakamaka memo yekuongorora mubhokisi rangu rekudaira kuti ndipindure kuongororo pandakakwanisa kupa nguva. Gare gare husiku ihwohwo uye mangwanani akatevera, ndakapedza yakanaka awa kana maviri kupindura ongororo. Nenzvimbo yakavhurika yemavara, ini ndaive ndakananga uye kusvika pakukanganisa kushora kwangu. Mushure mezvose, semutengesi, kuvandudzwa kwechigadzirwa chavo kwaive mukati my kufarira kwakanyanya. Ini handina kudhonza chero zvibhakera uye ndaive kumberi kumberi pane izvo zvandainzwa izvo zvakakosha nyaya kuva. Ndakaunzawo tarenda rakanga rasiya kambani - ivo vakarasikirwa nevashandi vazhinji vakanaka.
Kunyangwe ongororo iyi yakanga isingazivikanwe, ini ndaiziva kuti kwaive nekutarisisa zvitupa pahurongwa hwekutumira uye zvirevo zvangu zvakajeka zvinogona kuzivikanwa nekambani seyangu. Ini ndakanga ndisinganetseke nezve chero mhedzisiro, ivo vaive vabvunza maonero angu uye ini ndaida kuzvipa kwavari.
Kuburikidza nemuzambiringa nhasi (pane nguva dzose muzambiringa), Ndakaona kuti zvandaitaura zvaive zvadzokororwa kuburikidza nekambani uye kuti, muchidimbu, ndakanga ndisingagamuchirwe kushanda nekambani kuenderera mberi nehukama.
Mhedzisiro, mumaonero angu, ipfupi-kuona uye kusakura. Zvekuti hapana akasvika kwandiri pachezvangu zvinoratidza kushaikwa kwehunyanzvi zvakare. Nekutenda kwandiri, kune akawanda akawanda masevhisi evanopa kunze pamusika anogona kupa izvo zvandinoda nemari shoma shoma uye zviri nyore kubatanidza. Ini ndaive netarisiro yekubatsira yangu yekare kambani kubuda nekupa imwe nyowani, yakatendeseka mhinduro.
Dai vaisada maonero angu, ndinoshuva dai vasina kumbobvunza Ingadai yakandiponesa maawa mashoma enguva yangu uye hapana manzwiro emunhu angadai akakuvadzwa. Hapana kunetseka, zvakadaro. Sezvavanoda, hapana zvandichaita kuti ndiwedzere hukama chero hwavo
Tags: gettinderboxproposalchikumbiro manejimenditsvaga mabhenji
Gumiguru 28, 2008 na3: 25 PM
Chinhu chimwe chete chakakodzera kufungisisa apa ndechekuti nhau dzawakanzwa ndedzechokwadi here kana kuti runyerekupe chete. Mahofisi inzvimbo dzinotyisa dzerunyerekupe, zvinogona kuti vanhu vanoongorora zvawatumira vangobuda ndokutaura zvimwe zvinhu zvavasingafanirwe kuva nazvo, uye mumwe munhu ari pedyo akazvinzwa uye akazvitora semutemo wepamutemo. Runyerekupe rwakabva rwatsauswa uye ruchishandurwa kubva pane yakapusa kesi yekuteerera mune chimwe chinhu chakaipisisa.
Ehezve iko kungofungidzira 🙂 Zvinogonekawo kuti iwe unogurwa kubva kune chero kambani iri mubvunzo yauri kutaura nezvayo.
Asi ini ndinofunga mubvunzo wandingave ndichizvibvunza panguva ino - ndine hanya here? Kana iwe uine manzwiro akasimba kukambani iyi (zvinova zvinoita sekunge iwe unoita mune yako posvo), saka iwe unonyatsoda kuramba uchishanda navo chero zvakadaro?
Gumiguru 28, 2008 na6: 40 PM
Kutenda nemhinduro huru, Christian. Ini zvirokwazvo ndingadai ndisina kutumira dai ndaive nekusahadzika pamusoro payo kuva runyerekupe kana chokwadi. Ichokwadi, ichokwadi.
Chidzidzo chekambani chero ndechekuti, kana iwe usina kugadzirira kuwana mhinduro yakaipa, usatumira ongororo inoikumbira!
Gumiguru 28, 2008 na8: 48 PM
Ndechipi chidzidzo chawakadzidza?
Gumiguru 28, 2008 na9: 25 PM
Ross, angave akanakisa kutaura nguva dzese. Ini ndinofunga chandakadzidza ndechekuti makambani mazhinji anongovimbisa kuvimbika kudhora uye kwete vashandi vavo kana vatengi vavo.
Ini handina masheya mukambani uye handina chikwereti navo chinhu, saka ini handifanire kunge ndichitora izvi pachangu. Ini ndichazvipfuura nekukasira zvakakwana uye nditsvage kambani inoda kuteerera.
Gumiguru 29, 2008 na2: 18 PM
Ini ndinofunga dambudziko rechokwadi nderekuti kambani haina kunzwisisa kukosha kwekutungamira kumberi, kwakaoma-kurova mhinduro. Sekutaura kwaDoug, kana iwe usiri kufarira kunzwa zvakanaka nezvakaipa, saka usabvunza mumwe munhu angave akatendeseka newe. Kana zvese zvauri kutsvaga zvakanaka, zvakanaka, zvinodziya, zvine mutsindo mhinduro. Wobva wasarudza-ruoko vatengi / vatengi vaunoda mhinduro kubva kwavari, vafonere kumusoro uye ubvunze "Chii chaunoda pamusoro pedu?" Mumwe mubvunzo, ndizvozvo, nekuti muchokwadi ndizvo zvese zvinoita sekunge iwe uri kunyatsofarira kunzwa zvakadaro.
Kanganwa nezve chokwadi chekuti iwe unogona kuve nemutengi anoziva zvishoma nezve sevhisi yauri kuyedza kutengesa uye zvazvinoreva kushandisa chaiko kugona kwayo. Mutengi wauri kufuratira anogona kunge ari iye akangwara zvakakwana kuti azive kuti ndeipi mibvunzo inofanirwa kubvunzwa nevatengi vese uye haizi nekuti 95% yavo havana chavanoziva kunze kweicho iwe chaunovaudza nezve rako sevhisi.
Kana iwe usiri kuda kugadzirisa kana kugadzirisa izvo zvaunazvo uye kuzviita zvirinani, usatambise nguva yedu. Kune akawanda mamwe masevhisi senge ako isu atinogona "tsoko" kutenderedza pamwe pachinzvimbo.
Gumiguru 29, 2008 na3: 22 PM
Kunyangwe zviipe sei mhinduro iyo kambani inofanirwa kunge ichitora semukana wekuvandudza. Iwe wakavapa chaizvo izvo zvavakakumbira ivo vanofanirwa kufara kuzviwana.
Kana ivo vachifunga kuti haina kukodzera, hanya nezvakaipa uye shandira pane izvo zvakanaka.
Zvese mune zvese hunhu hwakashata hunobvunza maonero asingazivikanwe uye wozomira pamusoro pako.
Nei ndingaendesa mumwe munhu ari kutengesa chigadzirwa changu?
Gumiguru 29, 2008 na4: 22 PM
Ini ndinofunga izvi zvinounza nyaya hombe. Makambani anofanirwa kungwarira mune zvavanotaura pamusoro pevanhu vanoshanda zvakanyanya mumasocial media (senge iwewe). Ivo vanofanirwa kubata mabloggi nenzira imwecheteyo yavaizobata nayo mutori venhau. Kana ivo vari kukumbira yako maonero, ivo vanofanirwa kuishandisa sekushoropodza kunovaka kana kuifuratira. Chinhu chakanyanya kushata chavangadai vakaita ndechekuti ngazvitumirwe mublog rako ravakakuitira zvakadaro. Izvo hazviratidzi zvakanaka pamusoro pavo zvachose.
Gumiguru 29, 2008 na5: 43 PM
Ini ndinofunga ichokwadi kune imwe nhanho, Colin. Ini zvechokwadi handidi kuti vanhu vatye kuita bhizinesi neni muchiitiko chimwe chinhu chakaipa chingaitika uye ini ndinogona kubloga nezvazvo, zvakadaro. Sezvaunoona pamusoro, ini handina kana kumbotaura kuti ndiani uye ini handingambozviita.
Dzimwe shamwari dzangu dzepedyo dzinoshandira mabhizinesi uye ini handingamboedza zvine utsinye kukuvadza bhizinesi ravo - asi ini ndicharamba ndichivimbika kana ndikabvunzwa.
Gumiguru 30, 2008 pa 12:18 AM
Doug, ndine hurombo kunzwa kuti izvi zvakaitika. Ini ndinotenda chaizvo mhinduro yako. Kune izvo zvakakosha - zvaunotaura zvine basa uye zvinokosheswa.
Kukadzi 15, 2009 na4: 12 PM
Zvakafanana ichokwadi kana mumwe munhu akabvunza chero mubvunzo, kureva kuti “ndeupi musiyano uripo pakati peIndy &. . . . ”Mubvunzo chaiwo wandabvunzwa nguva pfupi yadarika. Ini ndakanzvenga mhinduro nekuti ndaiziva kuti zvingangogumbura iye anobvunza. Nekudaro, payakabvunzwa kechipiri, ini ndakapindura & chokwadi chakaringana. . . iye akabvunza akaona kuti "zvinogumbura". Kunyangwe mhinduro yacho yaive yechokwadi.
Kana isu tisingade kunzwa mhinduro - kune chero mubvunzo - saka usabvunza munzvimbo yekutanga.